Battle Legion no lalao Androidsis tsara indrindra aminay amin'ny volana Jolay | Androidsis
Lalao Androidsis tsara indrindra amin'ny volana jolay: Battle Legion sy ny paikadiny multiplayer an-tserasera
Battle Legion dia mahazo ny loka ho an'ny lalao tsara indrindra amin'ny volana Jolay amin'ny Androidsis noho ny fahafahany mandray ny paikady amin'ny teboka mahaliana amin'ny finday. Indrindra ho an'ireo lalao asynchronized izay ahafahantsika mankafy traikefa multiplayer nefa tsy mila mandalo ny lalao amin'ny fotoana tena izy.
Efa niresaka herinandro vitsivitsy lasa izay momba ity lalao paikady ity isika miaraka amin'ny famerenana y andiana fampianarana hanamorana ny fandrosoana. Lalao izay ananan'ireo toerana, safidy miaramila ary fanatsarana ny mitovy, Hofaritan'izy ireo fa afaka mampiakatra ambaratonga isika. Freemium izy io, nefa mihantona.
Lalao tsara indrindra amin'ny volana miaraka amin'ny Battle Legion
Miaraka amin'ny fomba fijery hita mihoatra ny mahomby amin'ny loko mazava, ny endriny tsara ary ny karazany maro karazana, ny paikadin'ny Battle Legion dia ny mahay mandanjalanja tsara ny batalion-tsika mba hahafahantsika miakatra mandresy miaraka amin'ny fandresena.
Toy ny freemium madio mila mamoha ireo boaty isika hahazoana sombin-tsanganana ary afaka mampakatra azy ireo tsara. Ireto singa ireto ihany dia manana elanelam-bidy samihafa izay mety hofenoina rune izay manome azy ireo fanatsarana statistika amin'ny fahavoazana, fiarovana ary maro hafa.
avy eo no toerana stratejika amin'ny laharana voalohany amin'ny ady, ireo avy lavitra na ny mpandefa zana-tsipìka; toy ny ananantsika singa manokana mila teboka bebe kokoa noho ny fetra, fa ny fahalalana ny fampiasana azy ireo dia afaka mametraka ny famitana farany ny tetikadintsika.
Battle Battle Legion ihany koa tena tratra tsara amin'ny lalao izay tsy maharitra iray minitra ary mifanatrika ireo bataly roa tonta ka mpijery fotsiny isika. Mila manatsara ny batalion-tsika isika mba hahitana ireo singa hitantsika fa fahalemena ary koa hampiasa ny herin'izy ireo mba hampalemy ny làlan'ny fahavalo.
Ao amin'ny horonantsary nataonay asehontsika ny ampahany amin'ny soatoavin'ny lalao paikady izay manana ny fototra ampy mba ho iray amin'ireo lalaovina indrindra amin'ny volana ho avy. Eny marina fa diso ny fandanjalanjana tsara kokoa amin'ny ambaratonga avo kokoa isika, satria atsipy ny singa sasany, ny hafa kosa tsy mendrika izany; zavatra izay mitranga matetika amin'ireo lalao tetika ireo izay antony mahatonga ny fifandanjana ny lalao sy ny singa. Noho io antony io dia azontsika atao ny mahatakatra ny antony hatramin'izao dia mbola ny mpanjaka ihany no Starcraft ao amin'ny RTS na lalao tetika amin'ny fotoana tena izy.
Izao ianao Manoro hevitra anao izahay hanandrana Battle LegionTopazo maso ny horonantsary nataonay ary lasa anisan'ireo mpilalao an-jatony mankafy an'io fahatongavany lehibe io ianao. Toy ny tsy manadino ny fomba handresena lalao bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao Androidsis tsara indrindra amin'ny volana jolay: Battle Legion sy ny paikadiny multiplayer an-tserasera
Telegram dia efa mamela antsika handefa rakitra hatramin'ny 2 GB ary hametraka horonan-tsary ho sary mombamomba
Araraoty ny fahafaha-mividy an'ity microSD Samsung ity amin'ny tolotra 38%!